ကျောက်သားဖြင့် ပူဇော် ထုလုပ်ထားသော ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီး ??? – အနုပညာရပ်ဝန်း
ကျောက်သားဖြင့် ပူဇော် ထုလုပ်ထားသော ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီး ???
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်တွေကို ဂျပန်ပြည်၊ တရုတ်ပြည်တွေမှာ တော်တော်လေး ကို ဉာဏ်တော်မြင့်မြင့် (အကြီးကြီး) ထုဆစ်ပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း ဒီလို ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးရှိသလို အခုတစ်ခေါက်ဖော်ပြပေးမှာက တရုတ်ပြည်ကပါ။ထူးဆန်းတာက ကျောက်သားတွေ ကို ထွင်းထု ပူဇော်ထားတာဖြစ်ပြီး၊ တကယ့်ကို ကြည်ညိုပူဇော်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံ၊ စီချွမ်ပြည်နယ်၊ လေရှန်မြို့ရဲ့ အရှေ့ဖက်မှာ တည်ရှိတဲ့ လေရှန် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးဟာ ယူနက်စကိုက တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့နေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၉၉၆)ခုနှစ်မှာ အတည်ပြုပေး ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ သိပ်မကြာသေးတဲ့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကမှလို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။
ရုပ်ပွားတော်မြတ်တည်ရှိရာနေရာက မြစ်သုံးခုပေါင်းဆုံတဲ့နေရာဖြစ်နေတာကလည်း ထူးဆန်းနေပါတယ်။လူအများနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ သင့်ကို လက်ခံဖို့ ချစ်ခင်ဖို့ ဆိုတာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်- မလိုအပ်ဘူးထင်ပြီး
သင့် ရဲ့ဆက်ဆံပုံ ဆက်ဆံနည်း လွဲမှားသွားခဲ့ရင်တော့ သင် မိတ်ပျက်ပါပြီ- ဒါကြောင့် ဒီ ဗီဒီယိုလေးကိုသာ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ပါတန်မင်းဆက် (၇၁၃)ခုနှစ်မှာ စတင် ထုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ပြီး၊ (၈၀၃)ခုနှစ်အရောက်မှတော့ လေရှန်ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကို ပြီးစးခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း (၉၀)လောက် ကို အလုပ်သမားတွေဟာ မနေမနား ကြိုးစားခဲ့ရသလို အင်အားအများကြီးသုံးပြီး အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်
ကျောက်သားနဲ့ ပူဇော်ထား တဲ့ ရုပ်ပွားတော်မြတ်တွေ ထဲမှာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စံချိန်ဝင်ထားပါတယ်ဉာဏ်တော်အမြင့် (၂၃၃)ပေ ရှိတဲ့ ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးဟာ လက်ချောင်းတော်က (၂၇)ပေ၊ ခြေဖမိုးတော်က ပေ (၃၀) နဲ့ ပုခုံတော်က (၇၉)ပေ အကျယ်အရှည်တွေ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
စတင်သွန်းလုပ်ဖို့ အကြံပေးခဲ့တာက ဘုန်းတော်ကြီး ဟိုင်တုန်ဟာ မြစ်ရေသုံးခုပေါင်းဆုံတည်ရှိနေတဲ့ ဒေသမှာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကို ကာကွယ်ဖို့ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ အရိပ်အာဝါသအောက်မှာ ရှိစေရန် အလို့ငှာ တည်ထား ကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တမ်းမှာတော့ ဒီ ထပ်ဆန်းပြားတဲ့ အန္တရာယ်တွေကြုံ လာနိုင်ဖို့ ရှိခဲ့ပြီး၊ ဒေသနေပြည်သူတွေ ဝတ်ပြုဆုတောင်းဖို့အတွက် တည်ထားနေစဉ်မှာပဲ ဘုန်းတော်ကြီးဟာ ပျံလွန်တော်မူခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဝက်လောက်ပဲ ပြီးစီးသေးပေမဲ့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး၊ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူ အများကြည်ညိုဖွယ်ရာ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီး အဖြစ် တည်ရှိလာ ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ တရုတ်ပြည်ကို တကူး တက လာဖူးရတဲ့ အဓိက ခရီးသွားနေရာ ဖြစ်နေပြီး၊ ကမ္ဘာအနှံ့နှံ့က ခရီးသွားတွေကလည်း ထူးခြားဆန်းကြယ်ခဲ့မှုတွေကို ကြည့်ရင်း နေ့တိုင်းတဖွဲဖွဲလာနေကြပါတယ်။
”ပူဇော်ထားသင့်သော ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ ဗုဒ္ဓ ခြေတော်ရာ ချခဲ့သည့်နေရာ ( ၁၀ ) နေရာ…”
၂၇ ခေါက်သာ ရွတ်ဖတ်ပါ ဘဝတွင် စိန်၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ အိမ်၊တိုက်၊ ခြံ၊ ကား အဆင်ပြေပြေ ဝင်လာစေမည့် ဂါထာတော်